इन्टरनेट-दोकान "डा टेक्नो": समीक्षा
एक गुणस्तर इलेक्ट्रनिक्स स्टोर कसरी चयन गर्ने? तिनीहरूले उहाँलाई खरीदारों के भन्न पत्ता लगाउनुहोस्। यस लेखमा मार्फत हामी तपाईँलाई इन्टरनेट स्रोत "डा टेक्नो" विश्वास गर्ने कि बाहिर आंकडा गर्न मद्दत गर्नेछ। त्यहाँ उच्च गुणस्तरीय विद्युतीय उपकरणहरू बेच्न हुनुहुन्छ?
एक इलेक्ट्रनिक्स स्टोर को मुख्य लाभ, Mitino मा "डा टेक्नो" आफ्नो अति किफायती मूल्यहरु छ। यो कारण स्रोत भाडामा वा उपयोगिता, वा बिक्री कार्यालय सेवा व्यावसायिक परिसर भुक्तानी गर्न कुनै आवश्यकता छ भन्ने तथ्यलाई गर्न, क्रमशः, काम र आफ्नो धेरै कर्मचारीहरु तिर्न छैन छ। यो उत्पादन मा न्यूनतम मार्जिन सेट र आफ्नो ग्राहकहरु सबैभन्दा किफायती मूल्यहरु प्रसन्न गर्न अनुमति दिन्छ।
साथै, अनलाइन स्टोर सेवा प्रयोग, "डा टेक्नो", तपाईं एकदम आफ्नो समय र शारीरिक प्रयास बचत गर्न सक्नुहुन्छ। किन्नुहोस् सट्टा लागि उपयुक्त ग्याजेट एक व्यर्थमा खोजीमा घन्टा खर्च को, आफ्नो घर देखि इच्छित, तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ सीधा।
कुनै कम सुखद भावना तपाईं पसलमा काम व्यवसायीक सञ्चार बाट प्राप्त गर्नुहोस्। सबै कर्मचारी - आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न जिम्मेवार छन् जो सुखद गम्भीर मान्छे आफ्नो ग्राहकहरु को आवश्यकता पूरा गर्न।
तपाईं आफ्नो खरीद अविश्वसनीय छिटो प्राप्त हुनेछ। नियम, आदेश र यसको तत्काल भुक्तानी राख्दै पछि बीस-चार घण्टा भित्र वाहक द्वारा वितरण रूपमा। खरीदार इच्छित उपकरणको अघिबाटै जान्ने काम मा सप्ताह खर्च गर्न हुनेछैन।
ग्राहकहरु प्रस्ताव भइरहेको छ कि सबै उपकरण अनलाइन स्टोर, सम्पूर्ण सेवा जीवन भित्र उचित कामकाज ग्यारेन्टी गर्न प्रमाणित, साथै दक्ष पछि-बिक्री सेवा छलफल। कुनै पनि समर्थन कागजात तपाईं दोकान सीधै सोध्न सक्नुहुन्छ।
"डा टेक्नो" - अनलाइन स्टोर फोन, ट्याब्लेट र विभिन्न सामान। तपाईं यो स्रोत के पाउन सक्छन्? तसर्थ, व्यावसायिक उपलब्ध उत्पादन दायरा समावेश प्रसिद्ध ब्रान्ड smartphones ( "सैमसंग", "एप्पल", "नोकिया", "लेनोभो", "एल Dzhi", "एसस", "हैरानि", "Blackwill", "माइक्रोसफ्ट", " सोनिया "र अरूलाई), उच्च गुणस्तरीय प्लेट (" सैमसंग "," लेनोभो "," स्याउ "एट अल।)। पनि वर्तमान साइट मा तपाईं सामान को एक किसिम भर्खरै प्राप्त प्रविधि (ब्याट्री, चश्मे भर्चुअल वास्तविकता, सुरक्षा, फिलिम, एडप्टर, हटाउन सकिने प्यानल, कार धारकों, केबल, डकिंग स्टेशन, अवस्थामा, चार्जर्स, pouches पट्टियाँ, monopods, पन्जा, पाउन सक्नुहुन्छ Bumpers, हेडसेट, आदि डी।)। यस्तो विकल्प पनि सबैभन्दा समझदार खरीदारों आफ्नो स्वाद र बजेट केही फेला पार्न मद्दत गर्नेछ।
यस बारे के उपभोक्ताहरु भन्न अनलाइन स्टोर "डा टेक्नो"? समीक्षा यसलाई एक विस्तृत विविधता छ। कुनै पनि अवस्थामा, ग्राहकहरु को विशाल बहुमत धन्यवाद दिन चाहन्छु र छलफल पत्रिका संग सहयोग मात्र सुखद छापहरू दाबी थियो। ग्राहकहरु मानक स्रोत आदेशहरू को उच्च गति, मैत्री सेवा, अतिरिक्त सेवाहरू imposing को रूप मा कुनै अत्यधिक खराब ध्यान आनन्द। यो उत्पादनहरु अचम्मको र उल्लेखनीय दायरा, सबैलाई आफैलाई लागि सही मोडेल पत्ता लगाउन अनुमति दिन्छ जो छ।
तर, को पाठ्यक्रम, अनलाइन स्टोर "डा छोड्न टेक्नो" समीक्षा र होनहार भन्दा कम। यस कम्पनीको ग्राहक dissatisfaction कारण के हो? को बाधा को मुख्य स्रोत एक समय पछि उपकरणहरू केही मोडेल असफल भन्ने तथ्यलाई छ। एकै समयमा, नियम, यो ठाउँ एक समय मा ग्यारेन्टी खरिद अझै पनि सान्दर्भिक छ जब लाग्छ। र, ग्राहकहरु आफूलाई अनुसार, पसलमा कर्मचारी सजिलै मुक्त निदान र मरम्मत को रूप मा सहायताको लागि अनुरोध प्रतिक्रिया हुनेछ।
तपाईं अनलाइन स्टोर "डा टेक्नो" प्रदान गर्दछ जो उत्पादनहरु को वितरण, धेरै उपलब्ध विधिहरू एउटा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। उपभोक्ता समीक्षा स्रोत नै अर्डर यो विषय स्रोत हो रूपमा ग्राहकहरु खरिद रूपमा सुखद बनाउन मद्दत ठूलो प्रयासहरू छ जबकि परिवहन प्रणाली, पूर्ण समायोजित छ सूचित।
पहिलो तरिका - को कुरियर को मद्दत सही ठाउँमा चयन उत्पादन को वितरण छ। अहिले यो विधि सबै किफायती छ र केवल धनी को एक सुअवसर छ। यो वितरण विधि समय बचत गर्न मद्दत गर्छ र ठीक र प्रभावकारी तपाईँको दिन योजना। को कुरियर को प्रस्तावित स्थान र आगमन समय तपाईं संग छलफल गर्न अग्रिम कुरियर सेवा कर्मियों। तिनीहरूले पनि सिधै डेलिभरी दिन सबै आवश्यक स्पष्टिकरण उत्पादन। यो दृष्टिकोण ग्राहक सेवा अधिकतम सुविधा अनुभव गर्न उत्तरार्द्ध मद्दत गर्छ। मा सञ्चालन वाहक, "डा टेक्नो" अनलाइन स्टोर, आफ्नो व्यावसायिक गतिविधिहरू लागि जिम्मेवार छन् जो गम्भीर चिटिक्क मानिसहरू हुन्। नियम, मास्को शहर को वितरण आदेश पछि पहिलो दिनमा बाहिर छ। परिवहन उत्पादनहरु पनि मास्को क्षेत्र मा स्थित ठूलो र सानो बस्तियों को एक विशाल संख्या मा उत्पादन। सेवा को मूल्य, नियम, कम्पनी को कार्यालय बाट कति टाढा वितरण बिन्दु मा निर्भर गर्दछ।
अर्को विधि अनलाइन स्टोर "डा टेक्नो" प्रदान गर्दछ। राम्रो समीक्षा ग्राहकका लागि उपयुक्त समय पूर्व द्वारा कार्यालय खरीद टिप्न आफ्नै को संभावना बारे भन्न। यो सेवा को लाभ के हुन्? ग्राहक व्यक्तिगत, खरिद उत्पादन को कामकाज गुणस्तर आकलन गर्न ढुवानी मा सुरक्षित र पनि दोकान मा काम पेशेवरहरुको लागि आफ्नो सबै प्रश्न मौका पाउँछ।
त्यहाँ धेरै तरिकामा भुक्तानी आदेश उपलब्ध छन्। अर्को, हामी तिनीहरूलाई प्रत्येक नियालेर लिन।
नगद को गणना पैसा। उहाँले आदेश पार्सल पठाएमा जब यो मामला मा, धन कुरियर मार्फत आपूर्तिकर्ता स्थानान्तरण हुनेछ।
क्रेडिट गणना (यस मामला मा प्रतिवर्ष 10% को दर मा ब्याज चार्ज छ)। धेरै scares बैंक र सम्बन्धित कागज औपचारिकताएँ गर्न ऋण को उद्घाटन को लागि अनुरोध गर्न आवश्यक छ। तर, अब यो सम्भव साइट, "डा टेक्नो" (अनलाइन स्टोर) मार्फत प्रत्यक्ष सबै आवश्यक कागजी कार्रवाई डिजाइन छ।
को केिकलयिरग को गणना। यो भुक्तानी विधि प्रयोग गर्दा तपाईं बैंक शुल्क, प्रति हस्तान्तरण रकम को प्रतिशत तीन जो तिर्न छ। अक्सर कानुनी निकायहरूको यो विधि रुचाउँछु। यसलाई प्रयोग गर्न, तपाईँले चेकआउट प्रक्रिया चलिरहेको बेला भुक्तानी विधि निर्दिष्ट गर्न समय आवश्यक छ। "डा टेक्नो" (अनलाइन स्टोर) ग्राहक लागि सुविधाजनक बैंक को कुनै पनि शाखा भुक्तानी लागि डिजाइन खाता प्रदान गर्नेछ। तपाईं बिल जारी भएको थियो क्षण देखि पाँच दिन भित्र मा भुक्तान गर्न सक्नुहुन्छ। कि अवधि को अन्त मा, भुक्तान गरेको छ भने, खाता स्वतः शून्य छ। सामान गणना पछि एक दिन भित्र ग्राहक वितरित गरिनेछ।
आफ्नो नयाँ ग्राहकहरु फेरि र फेरि आउँदै गरेको स्रोत निश्चित बनाउँछ। त्यसैले, यो गुणस्तर र कुनै पनि विद्युतीय उपकरणहरू अनलाइन स्टोर, "डा टेक्नो" मा खरिद व्यावसायिक पछि-बिक्री सेवा प्रदान गर्दछ। खरीद पछि एक वर्ष भित्र, ग्राहक सल्लाह, निदान लागि वा ग्यारेन्टी मरम्मत को कर्मचारी लागू हुन सक्छ।
जहाँ अप खरिद सामान टिप्न छ? : राजधानी त्यहाँ पूर्व अनलाइन स्टोर "डा टेक्नो" को एक केन्द्र हो मास्को, Pyatnickoe राजमार्ग, घर 14 बेंचमार्क मेट्रो स्टेशन "Volokamskaya" सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। पनि भण्डारमा, "डा टेक्नो" कार्यालय (समान ठेगाना), उपभोक्ताहरु कुनै पनि प्रश्न वा भ्रम को खरीद प्रक्रिया वा खरिद सामान गुणस्तर बारे भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
एक अनलाइन स्टोर समीक्षा अन्तर्गत सेवाहरू प्रयोग गर्न निर्णय वा गर्न, ध्यान स्टोर, "डा टेक्नो" (मास्को) को समीक्षा छलफल गर्नुपर्छ। त्यो अपनाए लक्ष्य छ र यस लेखमा तपाईं स्रोत प्रयोगकर्ताहरूको भरोसा प्रयोग कि हेर्न मदत छ। निर्णय र बाहिर यो साइट को मद्दतले आफ्नो पहिलो खरीद पूरा गर्न हतार।
सबै भन्दा राम्रो को सेवाहरू प्रयोग र एक खरीद पछुताउनु छैन!
भुक्तानी प्रणाली "PRO100": समीक्षा। नक्सा "प्रो 100" Sberbank
क्लाउड भुक्तानी पूर्वाधार PayQR: समीक्षा। पैसा स्थानान्तरण प्रणाली
Krivoy Rog को वनस्पति उद्यान - स्वर्ग
अनुभूति सेतो - विद्युतीय नृत्य संगीत को महान् पर्व
एस्कोर्बिकएसिड, वा भिटामिन सी: सबैभन्दा जसमा
यामाहा WR450F: विनिर्देशों, समीक्षा र फोटो
पति Natali Oreyro: जीवनी, फोटो
कान को Perichondrium: लक्षण, उपचार, फोटो